Chitsva chiitiko chiitiko chiri kuona. Pemberera Zuva Rekunze reYoga | IPhone nhau
Ichi chave chatove chinetso chakajairika mumakore achangodarika evashandisi veApple Watch, ndezvekuwana dambudziko nemenduru yaro inoenderana, zvitambi nevamwe munguva yeZuva reYoga renyika. Iri dambudziko riri kuitwa kubvira gore rapfuura 2019 apo Apple yakazvitangisa kekutanga.
Dambudziko rekupedzisira rakagadzirirwa naApple raive iyo yeInternational Dance Day, chinetso chitsva chose chegore rino chakatangwa muna Kubvumbi 29. Mune ino kesi, dambudziko reyoga kurovedza muviri harisi idzva uye vashandisi veApple Watch vatozviziva chaizvo.
Ramba uchishingaira chero mubairo
Nzira yakanakisa yekuve noutano ndeyekunamatira kugara uchirovedza muviri kana kurovedza muviri uye nekudya kudya kwakaringana. Mupfungwa iyi tiri pachena kuti sarudzo inogara iri kumushandisi Asi kana tikawana Push shoma kubva kuApple nedambudziko rakareruka senge iri, tinogara tichiwana zvakawanda zvakawanda.
Mune ino kesi Dambudziko iri rine kuita maminetsi makumi maviri eiyoga munaJune 20 uye kuinyoresa mukushandisa kwekushandisa kweApple Watch yedu neizvi isu tichawana menduru, izvo zvekunamatira uye muyero wehutano uyo uri chokwadi wekuuya unobatsira. Chaizvoizvo chokwadi chekufamba chatove chakanaka saka muzviitiko izvi chinhu chakakosha hachisi chekuzadzisa chinangwa pachacho asi kuwedzera chiitwa ichi mazuva mazhinji, inzira yekubatirirwa nezviitiko zvemuviri uye Apple inozviziva zvakanaka. Une zuva rese kupedzisa dambudziko iri saka nyora pasi pane yako ajenda uye rova ​​iyo yoga!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chitsva chiitiko chiitiko chiri kuona. Pemberera Zuva reYoga Zuva
Isu tatova neturera uye zuva rekuvhura kweApple TV nhevedzano + "Invasion"